MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE POODLE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Poodle Dog iyo Sawirro
'Labo Poodles Faransiis ah oo caadi ah, hooyo iyo gabar - kan kore waa Chanel, waana gabadha. Midka hoose waa hooyada magaceedana waa Tella.
Standard Poodle waa eey dhexdhexaad ah ama weyn. Marka loo hagaajiyo si loo muujiyo heerarka eyga jirka waxaa looga jeedaa inuu bixiyo muuqaal laba jibbaaran. Qiyaastii waa dherer la mid ah dhererka meesha engegay. Dhakada ayaa si dhexdhexaad ah loogu soo koobay joogso yar laakiin sugan. Waxay leedahay gun dheer, oo toosan. Indhaha mugdiga ah, ee u eg oval-ka ayaa xoogaa kala fog oo waa madow ama bunni. Dheguhu waxay sudhan yihiin meel u dhow madaxa wayna dheer yihiin oo fidsan yihiin. Labada lugood ee hore iyo gadaalba waxay u dhigmayaan cabirka eeyga. Khadka sare waa heer. Dabada ayaa la dhigay oo kor loo qaaday. Mararka qaarkood waxaa lagu xiraa kala bar dhererkiisa ama ka yar si eygu u ekaado mid dheellitiran. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Cagaha u eg-oval-ka way yaryihiin oo suulasha ayaa qalooca. Koodhku waa mid duuban ama xadhig leh. Waxay ku jirtaa dhammaan midabada adag oo ay ku jiraan madow, buluug, qalin, cawl, kareem, abrikot, casaan, caddaan, bunni ama kafate-au-lait. In kasta oo aysan sameynin heerka bandhigga qoran, kuwa wax soo saara qaarkood ayaa tarma Poodles midabbo kala duwan leh. U fiirso qurxinta noocyada kala duwan ee Poodle clips.
Standard Poodle waa mid sharaf leh, qurux badan, sharaf leh, dabeecad wanaagsan, raaxo leh oo faraxsan. Eygan oo aad u caqli badan waa mid ka mid ah noocyada ugu tababbarka badan. Qaar baa noqon kara tababaray ugaarsi. Standard Poodle guud ahaan waa tamar hooseeya oo inta badan ka xasilloon noocyada yaryar ee Poodles, laakiin wuu sarrayn doonaa haddii aadan siin xaddiga saxda ah iyo nooca jimicsiga . Waxay u nugul tahay codka codkiisa mana dhageysan doono haddii ay dareento inay ka maskax adag tahay milkiilaheeda, hase yeeshe sidoo kale sifiican ugama jawaabi doonto anshaxa adag. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay is dejiyaan, haddana leeyihiin hawo awood dabiici ah. Maaha nooca eyga inuu ku noolaado banaanka qolka, maxaa yeelay wuxuu jecel yahay inuu la joogo milkiilayaashiisa isla markaana neceb yahay inuu keligiis ahaado. Guud ahaan waa mid saaxiibtinimo u leh shisheeyaha, waana mid ku fiican carruurta. Standard Poodle wuxuu ku fiican yahay eeyaha kale. Qaarkood waxay sameyn karaan eeyo waardiye oo wanaagsan. Hubso inaad tahay eeygan adag, joogto ah, hogaamiye xirmo kalsooni leh , bixinta maalin kasta xirmo socod si looga fogaado kala-go'id walaac iyo kuwa kale arrimaha dhaqanka aan loo baahnayn .
Dhererka: 15 inji (38 cm) ama ka badan.
Miisaanka: Ragga 45 - 70 rodol (20 - 32 kg) Dumarka 45 - 60 rodol (20 - 27 kg)
Tirada noocyada rasmiga ah ee loo yaqaan 'AKC' ee loo yaqaan 'Poodle breeds' waxaa lagu go'aamiyaa dherer, ma'aha miisaanka. Standard Poodle wuxuu ka sarreeyaa 15 hiish meesha ugu sarreysa garbaha. Jaangooyooyinka caadiga ah ee ah 15 inji ama ka yar kuma tartami karaan giraanta bandhigga 'AKC show' ee loo yaqaan 'Standard Poodles'.
Nooc cimri dheer, Poodles waa, si kastaba ha noqotee, waxay ku xiran tahay cuduro badan oo hidde ah. Indhaha oo qulqulaya, cataracts iyo soo-celinta hidde-wade horusocod ah, taasoo sababi karta indho la'aan Xasaasiyadaha iyo xaaladaha maqaarku waa wax caadi ah, oo laga yaabo inay sabab u tahay adeegsiga xirfada yar ee loo yaqaan 'clippers' ama xasaasiyadaha shaambo iyo / ama midab xoojinta. Hip dysplasia iyo infekshannada dhegaha ayaa sidoo kale caan ah. Waxay u nugul yihiin Cudurka Von Willebrand. Poodles Brown waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo cirro ah oo aan qaan gaadhin. Nooc u eg , sidaa darteed waa xikmad inaad quudiso Jaangooyadaada 2-3 cunno yar maalintii, halkii aad ka cuni lahayd mid weyn.
Haddii la siiyo jimicsi ku filan, Jaangooyooyinka caadiga ah waa kuwo gudaha gudaha ka hawlgala. Waxay ku hagaagi doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Daarad yar ayaa kufilan doonta.
Standard Poodle wuxuu u baahan yahay in la qaato maalin kasta socod . In kasta oo ay jecel yihiin biyaha oo ay jecel yihiin inay lugeeyaan, Poodles ma dalbanayaan illaa inta jimicsigu socdo, illaa iyo inta ay lugeynayaan. Si kastaba ha noqotee, waxay ku sii jiri doonaan niyad wanaagsan waxayna noqon doonaan kuwo hagaagsan haddii la siiyo fursado joogto ah oo ay ku ordaan oo ay ku ciyaaraan u bixin meel aamin ah. Heerka wuxuu hayaa dareenkiisa isboorti, wuxuu leeyahay adkeyn weyn, wuxuuna ubaahanyahay dhaqdhaqaaq ka badan noocyada yaryar.
Qiyaastii 12-15 sano ama ka badan
Qiyaastii 3-8 eyyo
Qurxin balaaran ayaa loo baahan yahay haddii eeyga la muujiyo. Poodles waa in si joogto ah loo maydhaa oo la xajiyaa lix ilaa sideed toddobaad kasta. Nadiifi oo hubi dhegaha si joogto ah wax ama caarada ama caabuqa oo soo bixi timaha ka soo baxa gudaha kanaalka dhegta. Ilkaha waxay u baahan yihiin miisaan balaaran. Maadaama jaakadu aysan daadin waxay u baahan tahay in la jarjaro. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'Poodle clips'. Kuwa ugu caansan ee milkiilayaasha xayawaanku leeyihiin ayaa ah fududaansho daryeel oo loo yaqaan 'xayawaanka xayawaanka,' 'yar yar' ama 'yar yar', halkaas oo jaakadku ka gaabiyo jirka oo dhan. Muuqaaladda bandhiga caanka ah waa sadarka Ingiriisiga iyo gunta qaaradaha, halkaasoo qeybta dambe ee jirka la xiirto, jijimooyin looga tago hareeraha anqawyada, iyo pom-poms ayaa looga tagaa dabo iyo miskaha. Heerka AKC wuxuu u oggol yahay eey ka yar hal sano in lagu muujiyo aaladda loo yaqaan 'puppy clip' oo leh shuruudo gaar ah sida foorarsiga dhamaadka dabada. Noocyada kale ee koodhka ah ayaa ah koodhka qaaradda ee la beddelay, magaalada iyo waddankiisa, xayndaabka ama agabyada korontada, kaydka xagaaga, iyo Miami ee bikini-ka Poodles wax yar ayey daadiyaan timo la'aan waxayna kufiicanyihiin kuwa xasaasiyadda qaba .
Baily madow Poodle madow da'da 8 sano
Baby Sarah the Poodle-ka caadiga ah ee jira 1 sano jir - 'Sarah waa qurux qurux badan oo buluug iyo qalin ah Poodle Standard. Waa la is tusay oo iyadu aad ayey uga dheregsan tahay waxayna u malaynaysaa inay tahay amiirad. ' Lahaanshaha sawirka Teampink Kennels
Baby Sarah the Standard Poodle oo ah 1 sano jir, sawir iska leh Teampink Kennels
Greta, oo ah Cadad Caan ah oo Caan ah
Bunker nooca Poodle-ka midabka midabka leh ee da'da 11 jirka ah— 'Bunker waa eey daaweyn sharciyeysan. Wuxuu booqdaa guryaha dadka lagu xannaaneeyo mararka qaarkood laakiin inta badan wuxuu aadaa fasalka Xannaanada si uu ula akhriyo carruurta. Isagu waa nin deggan oo adeeca. '
Prince, oo ah Poodle Standard-buuxa ah
Cadcad Qaangaar Caddaan ah
Sasha Standard Poodle sida eey yar oo ah 16 toddobaad jir
Tani waa 9 jir Merlin. Wuxuu leeyahay cinwaanno u hoggaansamid, Flyball iyo therapy.
'Kani waa Eygayaga caadiga ah ee loo yaqaan' Poodle puppy 'oo ku ciyaaraya barafka. Waxaan u qaatay maalintii barafkiisii ​​ugu horreeyay. Wuxuu jecel yahay cunista barafka iyo ku dhex socodka. Isagu waa 15 usbuuc oo durba culeyskiisu yahay 30 rodol. Waa wiil fantastik ah, oo dib loo dhigay.
Waxaan ku noolahay Koonfur Afrika oo waxaan leeyahay daarad aad u weyn. Anigu ma sii yaraa oo waxaan qaatay oo aan soo badbaadiyey wax badan oo ah 'Poodles Standard', dhammaantoodna leh arrimo badan. Waxaan u maleynayaa, ka dib markaan daawaday Eyga Whisperer in guushayda eydaas ay ahayd xaqiiqda aniga iyaga ku socday, sax ah, ma ahan iyaga aniga igu socdaan . Sidoo kale booska weyn, dibedda fasaxa usbuuca iyo barkadda dabaasha si ay tamarta uga saaraan. Waxaan haystay kaliya mid aan jeclayn dabaasha. Dhammaantood waxay iila yimaadeen da 'kala duwan. Amore sawirka waxaa laga yaabaa inuu jiray 7 ama 8 sano. Aad ayey u gaabinaysaa oo way ka gaabineysaa inay kacdo mararka qaarkood. Way adag tahay in la aamino ka dib markaad aragto sawirka. Waxay u isticmaali jirtay bool irdaha lagala socdo xawaaraha danab, taasi way dhamaatay hada. Iyadu waa a pro on xadhig ah oo waxaan helnay dabeecadda ugu deggan xitaa iyadoo eeyaha oo dhan ay nala ciyeyaan. Waxaan qaatay 2 kale oo 8 bilood jir ah walina waa faro ku tiris !! Labku wuxuu lahaa gardaro cunno. Wuxuu hadda wax ka cuni doonaa gacantayda oo hadda waan la tacaali karaa cunnadiisa, laakiin eeyaha kale weli wali lama saadaalin karo. Xilliga jiilaalka waxaa loo hagaajiyaa sida eeyaha showga ah, laakiin xagaaga waxay sameeyaan dabaal badan maalin kasta. '
garka sanka garka leh
Badbaadinta Poodles-ka ku nool Koonfur Afrika
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Poodle-ka caadiga ah
Sawirada Poodle Standard 1
Sawirada Poodle Standard 2
Sawirada Poodle Standard 3
Sawirada Poodle Standard 4
sidee loo xoqaa eeyaha lab ah
madow iyo tan chihuahua eeyo
lhasa apso iyo isku dhafka Pit
shakhsiga isku dhafan ee beagle cocker spaniel